‘अबको पाँच वर्षमा मुटु र फोक्सो प्रत्यारोपण नेपालमै’ – Tourism News Portal of Nepal
जसले ६ महिनामा १५० वटा फिस्टुला बनाए
।भक्तपुरस्थित मानवअंग प्रत्यारोपण केन्द्रले आफ्नो सेवा विस्तार गरेर मुटुको सस्तो र सुलभ उपचार गर्ने तयारी थालेको छ
चौबीसै घन्टा सुविधा दिने थालेको यो अस्पतालमा पहिलोपटक मुटुको अप्रेसन हुन लागेको हो। यसका लागि ‘हर्ट लङ मेसिन’ नामक मेसिन ल्याइसकेको र दसैं–तिहारको बीचसम्म मुटु अप्रेसन सुरु हुने डा. प्रेम वैद्यले बताए।
यसअघि वीर, टिचिङ र गंगालालमा पहिलोपटक मुटुको उपचार सुरु गर्दा अस्ट्रेलियन टिम आएको थियो। अब भक्तपुरमा सुरू गर्दा अमेरिकी टिम आउनेछ।
‘हामीले गरिब तथा विपन्न बिरामीका लागि भनेर सस्तो र सुलभ मूल्यमा चौबीसै घन्टा सेवा दिने तयारी थालेका छौं,’ वैद्यले भने।
नेपालमा अस्थायी क्याथेटर राख्न ५ हजार रूपैयाँ खर्च हुन्छ। स्थायीका लागि २० हजार खर्च हुन्छ। यो डेढ दुई वर्षका लागि उपयोगी हुन्छ। अस्थायी भनेको बढीमा ३५ दिन राख्न मिल्छ। त्यसपछि फेरि बनाउनुपर्छ। अहिले सरकारी अस्पतालमा २ हजार रूपैयाँमा फिस्टुला बनाइन्छ। निजी अप्सतालमा १० हजारसम्म खर्च लाग्छ।
एक वर्षभित्र अंग प्रत्यारोपण गर्ने लक्ष्यसहित १७ वैशाख २०६९ मा स्थापित मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले १० महिनामै मिर्गौलाको सफल प्रत्यारोपण गर्यो। साउन महिनामा किड्नी साटासाट पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ।
अहिलेसम्म २८० वटा ट्रान्सप्लान्ट सकेको अस्पतालले यही आर्थिक वर्षमा मात्र १०१ वटा सफल ट्रान्सप्लान्ट गरिसकेको छ।
‘अहिले सातामा कम्तिमा तीन मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिरहेका छौं’, केन्द्रका कार्यकारी प्रमुख डा. श्रेष्ठले भने, ‘हामीसँग सातामा ६ वटा प्रत्यारोपण गर्न सक्ने स्रोतसाधन छ। तर, दक्ष जनशक्तिको अभाव छ।’